Muuqaal: Coldoon waan toogan lahaa haddii aan ahaan lahaa madaxweymanaha Somaliland, sidaas waxaa yiri… - Caasimada Online
Home Warar Muuqaal: Coldoon waan toogan lahaa haddii aan ahaan lahaa madaxweymanaha Somaliland, sidaas...
Muuqaal: Coldoon waan toogan lahaa haddii aan ahaan lahaa madaxweymanaha Somaliland, sidaas waxaa yiri…
Hargeysa (Caasimadda Online) – Feysal Cali Waraabe waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland, waana siyaasiga ugu afka adag siyaasiyiinta Somaliland.
Feysal ayaa markii ka dhawaajiyey hadalkii ugu yaabka badnaa, isagoo ka dhawaajiyey inu toogan lahaa Wariye Coldoon haddii uu ahaan lahaa madaxweynaha Somiland.
Mar la waydiiyey dambiga uu galay Coldoon ayuu Waraabe ku jawaabay inuu u heesay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo intii uu joogay Magaalada Muqdisho.
Feysal ayaa sheegay in jiilka yar yar ee coldoon la faca ah inaysan waxba ka garaneyn dhibaatadii laga soo maray Somaliland, iyo dilkii loo geystay dadkii kasoo jeeday dhulka uu ka arrimiyo maamulka Somaliland intii ay jirtay dowladdii Siyaad Barre.
Feysal ayaa la waydiyey haddii ay saxaafadda Democracy tahay iyo waxa keenayo in la xiro coldoon, wuxuuna ka dhawaajiyey inaan loo dulqaadan karin shaqsi kasta oo kasoo hor jeedo gooni isku taagga Somaliland.
Hadalkaan ayaa imaanayi xilli weli uu Coldoon u xiran yahay Maamulka Somaliland iyadoo aan laga warqabin xukunka uu maray inta uu la eg yahay, waxaana lagu heystaa booqashadii uu ku imaaday Muqdisho iyo taageeradii uu u sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Haddaba hadalka Feysal ee yaabka badan halkaan hoose ka Daawo